Akanjo milanja trapezina - lava sy fohy, miaraka amin'ny akanjo lava sy manjelanjelatra, ny chiffon ary amin'ny dantelina, denim ary ny mitafy, mainty sy fotsy
Ny akanjo trapeze - fijery vaovao ny fomba nentim-paharazana
Ny lamaody maoderina matetika dia miverina amin'ny lazam-pandaminana ny fironana tsy misy adino taloha. Ny iray amin'ireo dia akanjo-trapezoid. Ny mahametsy, ny fahafaha-manao sy ny karazana modely amin'ity singa ity dia manampy amin'ny fananganana sary tsy hay hadinoina, fa koa mandidy ny hampiditra fitaovana maoderina ao anatin'ny lisitr'ireo singa mandidy amin'ny arsenal fototra.
Iza no manao akanjo lava?
Ny tombo-kase iray miloko marevaka dia nahazo laza tsy dia mahafa-po noho ny habetsany. Ny fomba tsara indrindra amin'ny akanjo trapeze dia raisina ho an'ny tompon'ilay sary miaraka amin'ny faritra tsy miseho. Raha manana tratra kely ianao, tsy misy lava, ary ny haben'ny soroka dia mifanaraka amin'ny habetsaky ny andilany, dia toy izany ny modely toy izany ho fikarohana tsara ho an'ny fifehezana ny vehivavy eo amin'ny lalàm-panorenana. Ny endrika maimaim-poana amin'ny lamina dia mety amin'ny vehivavy lamaody izay tsy afaka mirehareha amin'ny tsy fisian'ny santimetatra fanampiny. Ary tena mankasitraka ny famelomana ny tovovavy eo amin'ny toerany amin'ny fotoana rehetra.
Tamin'ity taona ity, ny lamaody lamaody dia nanitatra ny sehatra fiasany. Ny fehiloha lava dia manintona tanteraka ny tsipìkan'ny tsipika isan-karazany , fa amin'ny alalan'ny fitiavana mampihetsi-po ary eny an-dàlana ihany koa. Ny mpanamboatra dia liana amin'ny fanandramana amin'ny safidin'ny lamba, izay ahafahanao manao fitafy mahazatra amin'ny fotoana rehetra. Ary ny akanjo marevaka indrindra-ny 2017 dia maneho hevitra toy izao:
Dress-T-shirt trapeze . Ny felam-boninkazo ho solon'ny fitongilana dia tena azo ampiharina amin'ny vanim-potoana mafana. Ny akanjo noforonina dia vita avy amin'ny zavamanitra vatana voajanahary - lamban-jiro, lamba rongony, voapanga, sehatra.
Fanoloran-tena voatokana . Ny fanapahan-kevitra tany am-piandohana tao amin'ny fanangonana vaovao dia marika miova, manasaraka ny kofehy amin'ny akanjo. Amin'ny lamaody, mandroso sy miaina ambanin'ny tany, izay afaka manitsy ny fisehon'ny tarehimarika.
Dress trapeze trapeze . Ny rivotra tsara indrindra amin'ny lamba dia manintona indrindra indrindra amin'ny fitaovana manidina. Ao amin'ny karazana chiffon misy plastika, ny landihazo sy ny kirany dia manampy ny endriky ny fahazavana sy ny fitiavana.
Hira 3/4 . Io no heverina ho manerantany amin'ny fotoana iray amin'ny taona mba hamaranana ny ampahan'ny tànana amin'ny haben'ny elatra. Ny fametahana fohy dia tena ao anatin'ilay antokon'olom-bolo miaraka amin'ny fandrakofana tsara ny tendron'ilay sambo.
Modely amin'ny akanjo-trapeze
Ny tena zava-dehibe amin'ny famolavolana dia ny fananganana. Amin'ny fomba maoderina, ny minimalisma sy ny lamosin'ny loko no mitranga. Ny famongorana lava dia mampiseho tsara ny sata sy ny loko rehetra. Ny sary sy tarehimarika tsara amin'ny famokarana maimaim-poana dia tsy very ary tsy misy fo. Ny safidy lamaody iray ho an'ny sary amin'ny fironana dia ho toy izany:
Modely . Any amin'ny tendron'ny alemana printy modely misy ampahany lehibe sy kely. Ny tena manan-danja indrindra dia ny abstractions amin'ny voninkazo, ny biby ary ny geometrika na ny mombamomba ny endriky ny firavaka.
Ombre . Ny dian-tsambo tsy azo ovàna dia safidy tsara ho an'ny sary nalaina tamin'ny fomba mahazatra sy mahafinaritra. Ny akanjo hariva-trapezium miaraka amin'ny lokon'ny ombre dia hameno tsara ny tongolo maina.
Vahaolana tsotra . Ny endriky ny monochrome dia aseho amin'ny famoriam-bola vaovao misy palettes matsiro sy lalina. Ny loko mitarika dia ny loko afovoany - mena, manga, maitso, mavo ary marevaka.
Nude . Ity gamma ity dia asongadin'ny mpitondra iray misaraka noho ny tsy fisian'ny atsy na ny aroa. Beige dia tena zava-baovao na fambolena, ary amin'ny sehatra monophonic.
Dress Chiffon Chapel Train
Ny fampifangaroana singa mifangaro amin'ny fiaramanidina dia maneho fiheverana foana ary mampiavaka ny fahasamihafana sy ny fiterahana. Io safidy io dia tsara ho an'ny hafanana. Na ny modelim-pitaovana maro aza dia mamela ny vatany miaina ary tsy mameno ny sary. Ny akanjo tsy maotina maotina-trapezium dia mety amin'ny akanjobe mitafy, ary ny akanjo isan'andro. Chiffon dia mijery tsara tarehy tsara tarehy. Na izany aza, ampitomboina amin'ny akanjom-boninkazo, paingony, embroidery, ny vokatra toy izany dia hanampy ny hakantony sy ny fanatsarana. Ny hafanam-po amin'ny zavatra hita dia mahaliana amin'ny asymmetric modely, izay mahatonga ny akanjo-trapezoid amin'ny fahavaratra tsy mahazatra.
Ny asa misokatra malalaka dia mahafinaritra foana na dia lava aza. Na dia izany aza, mba hanamafisana endrika endrika trapezoidaly, ilaina ny manamboatra akanjo na mifidy vahaolana hafa amin'ny guipure. Ny vokatra mahasalama mahatsikaiky dia hampitombo hatrany ny fisehoana amam-panahy sy ny famindrampo. Ny akanjo trapeze miaraka amin'ny dantelina dia azo ampifandraisina, izay toerana misy ny kofehy vita amin'ny kofehy toy ny fako na fanasiana. Ho an'ny vokatra toy izany dia singa tena izy miaraka amin'ny kodiarana, chiffon, silk. Ny akanjo miaraka amin'ny fatorana fohy dia mijery ny tany am-boalohany, mamela sisam-paty, akanjo na kofehy mangarahara.
Ny fampihetseham-po sy ny fialan-tsiny indrindra amin'ny toetrandro dia ny akanjon'ny denim. Ao anatin'ny vanim-potoana mafana, ny laza dia nalaina avy amin'ny modely vita amin'ny jeans. Ny lamaody lamaody tamin'ny fahavaratra dia akanjo marevaka amin'ny volony, ny soroka, ny akanjony na ny hem. Na izany aza, mazava kokoa sy hita maso ny silhouette A-endrika dia azo faritana amin'ny fitafiana demi-taona. Ny tombontsoa lehibe eto dia mitoetra ao anaty haavon'ny fitaovana izay mihazona tsara ilay bobongolo. Amin'ny lamaody, ny endri-tsoratra dia toy ny lobaka misy fanakona bokotra. Ny akanjon'antoko manontolo dia mandresy amin'ny laconisme, izay manome safidy malalaka amin'ny fanampiana sy firavaka.
Manana siansa goavam-be, manjary manjavona ny fanamoriana ny fararano sy ny ririnina. Ny fahatsoran'ny ravin-kibo dia mora azo ho an'ny fanandramana na eo amin'ny tapa-kazo sy amin'ny farany. Amin'ny lamaody, vokatra monolithika misy endrika laconic. Ny safidy tsara dia ho modely amin'ny angom-bary na tsangambato lehibe. Mahafinaritra ny manala ny akanjo isan-karazany amin'ny paosy hoditra, volo bobongolo, tsipika eny an-tsoroka. Ny ankizivavy sy ny kanto dia mijery ny akanjo-trapezoid miaraka amin'ny manaloka amin'ny farany. Ity fanovozana ity dia manova kely ny endrika A, ka mahatonga azy ho tsara kokoa.
A silhouette manana endrika misy ao amin'ny singam-piravahana amin'ny akanjo maingoka dia azo lazaina mora kokoa ho toy ny lamba. Na izany aza, dia misy fihenam-bongotra avo loha izay mandrakotra ny feny sy ny lohalika koa, matetika hita amin'ny fomba amam-bika ankehitriny . Ny vokatra hafakely dia miavaka amin'ny fahatsarany. Ny tena mahavariana dia ny modely amin'ny kofehy, ny arana, ny ravina ary ny loko. Saingy ny fitaovana malefaka ao amin'ny trano fisakafoanana dia hisarika ny saina foana amin'ny fampiononana sy ny fampiononana. Ao amin'ny tahirin-tsakafo vokatr'izany dia nanjary lamaody ny lamaody mainty hoditra. Ny lokony malaza dia malaza amin'ny teknika amin'ny kiraro vita amin'ny kiraro.
Dress-trapezoid ho feno
Tokony hisongadina manokana ny maha-zava-dehibe ny isam-bolana iray manontolo. Trapeziformes tena tsara dia tsara ny endrika tsy mifanentana, miafina ny tavy matroka ary manasongadina busty mahafinaritra. Ary tsy ilaina ny mitafy lava tsy misy fotony. Mifanohitra amin'izany kosa, manolo-kevitra ny stylists-trapezy ho an'ny vehivavy feno fahalalahana sy fohy ny stylists, izay hanasongadina sy hametraka tongotra matevina. Raha manana soroka lehibe ianao, dia tokony hifantoka amin'ny modely misy akanjo amerikana, akanjo toy ny raglan na sleeveless sleeveless.
Ny akanjo trapeze - amin'ny inona no tokony harahina?
Rehefa mividy akanjo marefo, dia tsy ilaina ny mifidy singa manokana ho azy. Ireo singa tena mahazatra indrindra dia tafiditra ao amin'io fomba io. Na izany aza dia zava-dehibe ny mandinika ny halavan'ny vokatra. Ny akanjo trapeze amin'ny firaisana dia ny loha-hevitra fototra amin'ny sary. Tokony halefa miaraka amin'ny akanjo maoderina, indrindra fa ny loko maitso. Ny modely fohy dia azo ampitaina amin'ny fironana malemy sy malefaka na ampiasaina ho toy ny fototra. Mifototra amin'ireo fanoloran-kevitra farany amin'ny stylists, ilaina ny misafidy endrika toy ny akanjo, kiraro ary fitaovana ho an'ny silhouette A:
Jirama na jiro fohy . Ny akanjo mendrika, classic na fohy dia hameno tsara ny fomba maimaim-poana amin'ny takariva mahafinaritra na amin'ny sarin'ny orinasa. Ny fitaovana iray ho an'ny andro tsirairay dia ho fihinam-bolo-kiraro na jeans.
Kiraro amin'ny fomba fitenin'ny lehilahy . Ny famotehana maimaim-poana dia tsy mifototra amin'ny fisafidianana kiraro. Azo atao ny halimo, sy ny lampihazo, ary ny kofehy. Saingy ny fanapahan-kevitra maoderina amin'ny vanim-potoana farany dia ny làfrika , ny omby sy ny ombidia eo ambanin'ny silhouette A.
Torkia eo amin'ny tendany . Ampiasao ny fiterahana amin'ny endriky ny sarin-doko marevaka na volkano arafatka. Afaka misafidy singa iray sy loko iray ianao.
Ny sary dia retro . Ny sary dia manala ny sary amin'ny kofehy matevina na kofehy, toy ny fomba nentim-paharazana tamin'ny fotoana nisehoan'ny endriny stylish.
Akanjo marevaka amin'ny akanjo lava lava
Miverina amin'ny lohahevitry ny fahalalan'izao tontolo izao amin'ny akanjo marevaka, mendrika ny manamarika fa ny antsipiriany amin'ny loha-tanana eo amin'ny tanana dia manintona ny hakantony sy ny hakantony amin'ny fomba. Ny famotahana vita dia tsy vitan'ny fahombiazana amin'ny akanjo isanandro amin'ny vanin-taona mangatsiaka, fa koa amin'ny tsipìka ara-barotra mitam-piadiana. Mba tsy hikorontana amin'ny endrika maotina, ireo stylist dia manome loko loko iray loko. Ny akanjo fotsy fotsy misy akanjo lava dia mety amin'ny fety fampakaram-bady, indrindra raha toa ilay tovovavy. Amin'ity tranga ity, ny lasitra , ny chiffon, ny modelin'ny silk dia tena ilaina.
Akanjo marevaka misy akanjo fohy
Tamin'ny voalohany, ny endriky ny endrika trapezoidal dia niavaka tamin'ny fehiloha fohy na ny tsy fisian'ny izany mihitsy. Ny fijery nentim-paharazana amin'ny akanjo dia voatahiry tamin'ny fomba maoderina . Ny tena malaza dia modely amin'ny endriky T-shirt. Ny mpanamboatra dia manandrana fomba amam-pihetseham-pitiavana, manamboatra ny akanjo miaraka amina varavarankely na jiro mamiratra. Ny endriny voalohany sy ny endriny dia mitafy akanjo lava-trapezy miaraka amin'ny kofehy na ratra mangarahara. Eo amin'ny fironana vahaolana, ampiana amin'ny fanaka maoderina na mifanohitra - embroidery, bokotra, vato, applique.
Poncho avy any Pavlov Posad no mamelatra ny volony
Uggs miaraka amin'ny tsipìka
Italiana ambany jackets
Vary ho an'ny volo
Lalao maoderina 2013
Salady miaraka amin'ny trongan'ny akoho mifoka sigara
Scrapbooking: kilasy maoderina
Hazo maniry - votoatin'ny kaloria
Shoes - lamaody amin'ny taona 2014
Ny diagnosy dia tsy fanakanana: ny tantaram-pahombiazana amin'ny modely "Solaranely" voalohany Madeline Stewart!
Sharon Stone, Jane Fonda ary Alfrey Woodard tamin'ny Jona ny AARP The Magazine
Ireo faribolana eo ambany maso
Marininina, sakafon-tsakafo haingana - ny fomba mahandro sakafo matsiro mahavelona
Karl Lagerfeld nanery ireo modely tiany indrindra mba handoto ny ala!
Katy Perry sy ny poodle Nadjel dia nanam-bintana tamin'ny dokambarotra Citi Bank